madhav kumar nepal Archives - Nagarik Today
होम » madhav kumar nepal
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एकीकृत समाजवादी गठनमा आफूहरुको पनि मेहनत परेको बताएका छन् । बिहीबार काभ्रेमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सो पार्टीसँग सहकार्य बढाउन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए । ‘माधवजी, झलनाथजीको अर्को पार्टी बनेको छ । त्यो पार्टी बनाउनमा हाम्रो कम मेहनत छैन’ उनले भने, ‘तपाईंहरु पनि ….ती साथीहरुसँग सहज ढंगले सहकार्य बढाउनुहोला ।
प्रचण्डले विगतमा माधव नेपाल समूहमा रहेका र हाल नयाँ पार्टी गठनमा साथ नदिएका नेताहरु घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराईलगायतका नेताहरु पनि एमालेमा धेरै नटिक्ने दावी गरे । ‘बडो दया लाग्छ ती साथीहरुलाई देख्दा, ढिलो छिटो त्यहाँबाट निस्कछन् । त्यहाँ बस्ने ठाउँ छैन’ उनले भने ।
प्रचण्डले बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, विप्लव र मोहनबिक्रम सिंहको पार्टीसँग सहकार्य गर्न पनि काभ्रेका नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गरे । ‘किरणजी विप्लवजी, मोहनबिक्रम सिंह, बाबुरामजीको पार्टीसँग हार्दिकतापूर्वक अन्तर्क्रिया बढाएर लैजानुहोला । हामीले केन्द्रमा बढाइरहेका छौं’ उनले भने ।
अशोज ७, २०७८0comment
by नागरिक टुडे अशोज ६, २०७८
सत्तारुढ गठबन्धनका ५ राजनीतिक दलको बैठक आज पनि बस्ने भएको छ । बुधबार साँझ गठबन्धनको बैठक बस्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारले जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठक बस्ने तय भएपनि सिंहदरबार वा बालुवाटार कहाँ बस्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । आजको बैठकमा मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिनेबारे छलफल हुने बताइएको छ ।
मंगलबार पनि गठबन्धन दलको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा माओवादीबाट मात्रै भएपनि मन्त्री हुनेको नाम पठाउन प्रधानमन्त्री देउवाले अध्यक्ष प्रचण्डसँग प्रस्ताव गरेका थिए । सोही अनुसार मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउन माओवादी केन्द्रको स्थायी समितिको बैठक पेरिसडाँडामा बसिरहेको छ भने काँग्रेसको पदाधिकारी बैठक पनि सिंहदरबारमा केहीबेरमा बस्दैछ ।
यता गठबन्धन घटक नेकपा एकीकृतको केन्द्रीय समिति बैठक पनि जारी छ । काँग्रेसको पदाधिकारी, माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति र एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक सकेर गठबन्धनको बैठक बस्न लागेको हो ।
अशोज ६, २०७८0comment
by नागरिक टुडे अशोज १, २०७८
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले यथास्थितिमा एमसीसी अघि नबढ्ने प्रस्ट पारेका छन् । उनले एमसीसीका बारेमा आफूहरुका विभिन्न सात शर्त रहेको पनि जनाएका छन् । शुक्रबार नेकपा एकीकृत समाजवादीको पार्टी कार्यालय उद्घाटन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै चासोमा हतारमा एमसीसी सम्झता अघि बढाउन खोजिएको आरोप लगाए ।
‘एमसीसीका बारेमा हामी नेकपा एमालेमा छँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले आजै पास गर्ने, भोलि नै गर्ने भनेर त्यतिबेलाका परराष्ट्रमन्त्रीलाई गर्नै नहुने ठाउँमा हस्ताक्षर गराउनु भयो, उहाँकै अर्थमन्त्रीले विभिन्न हिसाबले एमसीसीका निम्ति सीमा नाघेर जानुभयो,’ उनले भने, ‘ती सबै कुराका हामी आलोचक हौं ।’ यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर अहिले सरकारले एमसीसीलाई प्रश्न सोधेको र त्यसको जवाफ एमसीसीले पठाइसकेको उनले बताए । ती जवाफका सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ छ ।
अध्यक्ष नेपालका अनुसार एमसीसीसमक्ष विभिन्न सात शर्त राखिएका छन् । ‘एमसीसीमा कुनै सेक्युरिटी अम्ब्रेलामा बस्नुपर्ने शर्त छ कि छैन ? त्यस्तो शर्त हामीलाई मन्जुर छैन भनेका छौं,’ उनले भने, ‘हामी कुनै पनि सेक्युरिटी अम्ब्रेलामा बस्ने शर्त मान्य छैन ।’ दोस्रो शर्तमा, नेपालले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने, पञ्चशीलको सिद्धान्त अवलम्बन गर्र्दै असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रति प्रतिवद्ध रहने भएकाले यस विपरीत हुने कुनै पनि शर्त आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने पनि एमसीसीलाई प्रस्ट पारिएको उनले बताए ।
यस्तै, छिमेकीप्रति कुनै किसिमको आशंका हुने परिस्थिति स्वीकार्न नसक्ने तेस्रो शर्त राखिएको उनले सुनाए । ‘प्रोजेक्टआउँदा यसको हाइटेन्सन लाइन बन्ने जग्गा नेपालको स्वामित्वमा रहने, सार्वभौम अधिकार नेपालको रहने सुनिश्चित हुनुपर्छ, यो हाम्रो चौथो शर्त हो,’ उनले भने, ‘यसको बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको अधिकार रहने सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।’
छैटौं शर्तमा एमसीसी परियोजनामा नेपाली कामदार, नेपालीले रोजगारी पाउने कुराको सुनिश्चितता हुनुपर्ने प्रस्ट पारिएको उनले बताए । सातौं शर्त अन्तर्गत एमसीसी परियोजनाको लेखा परीक्षणमा महालेखा परीक्षकको अधिकार रहने सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । अहिले गठबन्धन भत्काउनका लागि अनेक किसिमका दाउपेच भइरहेको भन्दै उनले त्यसविरुद्ध चनाखो हुनुपर्ने बताए ।
अशोज १, २०७८0comment
नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल एमालेमै फर्किने बताएका छन् । विदेश गएका मानिसहरु काम गर्न नसकेर घर फर्किएजस्तै माधव नेपाल पनि एमालेमै फर्किने भट्टराईको भनाइ छ । ‘समाजवादी पार्टीका नेता/कार्यकर्ताको मनमा एमाले छ । उहाँहरु एमालेभन्दा बाहिर बस्न सक्नुहुन्न,’ भट्टराईले भने, ‘उहाँहरु एमाले सिक भएर फर्किनुहुन्छ ।’ पोखरामा प्रेस चौतारी नेपाल कास्कीले पोखरामा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भट्टराईले वरिष्ठ नेता नेपालसहितको एमाले बनाउन आफूहरुले धेरै प्रयास गरेको बताए ।
माधव नेपालकै सहमतिमा कार्यदल बनाइएको, नेपालकै रोहबरमा १० बुँदे सहमति गरिएको तर नेपालले नै नमानेर हिँडेको भट्टराईको भनाइ थियो । ‘पार्टीभित्र केही विमति थियो । त्यसलाई वैधानिक ढंगले छलफलबाट हल गर्ने हो । पार्टीभित्र छलफल नगरी माधव नेपालले आफ्नै हिसाबले पार्टी फोर्नुभयो,’ भट्टराईले भने, ‘पार्टीभित्र विमति हुनेबित्तिकै विभाजन गर्ने होइन ।’
सबै नेता, कार्यकर्ता कोही व्यक्तिको पछाडि नलाग्ने भट्टराईले बताए । सुरुमा नेपाल खेमामा रहेका र अन्तिम समयमा ओली खेमामा गएका भट्टराईले आफूहरुले माधव नेपाललाई धोका नदिएको बताए । ‘नेता कार्यकर्ताहरु नेपालगञ्जको टाँगाको घोडाजस्ता होइनन्, दायाँबायाँ नहेरी नेताको पछि लाग्ने,’ भट्टराईले भने, ‘आफूले पनि अध्ययन गरेर, विश्लेषण गरी विवेक गर्न सक्छन् ।’
नेताहरुले मोदीबाट पनि सिक्न सकेनन्
अध्यक्ष बन्न नेताहरुले गरेको लालसा र आफूबाहेक अरुलाई नस्वीकार्ने पारिपार्टी नेपालका नेताहरुमा देखिएको भट्टराईले बताए । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पार्टीको अध्यक्ष हुन कहिल्यै लालसा नगरेको तर नेपालमा त्यहीँबाट पनि सिक्न नसकिएको उनको भनाइ थियो । पार्टीको कार्यकारी पदमा ७० वर्षको उमेर हद लागु भएपछि नयाँ पुस्ताले ठाउँ पाउने भट्टराईको विश्वास थियो ।
यो सरकार असफलतर्फ गइसकेकाले अब फेरि एमालेकै सरकार बन्ने भट्टराईले दाबी गरे । यो सरकारले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विश्वसनियता पनि गुमाइसकेको उनको भनाइ थियो । संसदलाई विधेयक दिन नसकेको, बजेट पारित गराउन नसकेर बजेट होलिडेको अवस्था आएको र एमसीसीका कारण एकमत हुन नसकेका कारण यो सरकार धेरै नटिक्ने भट्टराईले बताए ।
‘यो सरकार असफलताको बाटोमा गइसक्यो । अब यो सरकार बिस्थापित भएर एमालेकै सरकार बन्छ,’ भट्टराईले भने, ‘पार्टीहरुबीचका विवादले आजको दिनसम्म मन्त्रिपरिषद बिस्तार हुन नसक्नु लज्जास्पद छ । अहिलेसम्म हेर्दा यो सरकार पूरै असफलतातिर गइसक्यो ।’ सरकार गन्तव्य पत्ता लगाउन नसकेर आफै द्विविधामा रहेको भट्टराईको भनाइ थियो ।
ओलीको टिप्पणी–देउवाले प्रचण्डलाई बेहाल बनाए
by नागरिक टुडे भदौ ३१, २०७८
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पछि लाग्दा प्रचण्डको बेहाल भएको बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौं जिल्लाका एमाले कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले आफूले विगतमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई आठ दश वटा मन्त्री दिएको तर अहिले शेरबहादुर देउवाको पछि लाग्दा बेहाल भएको बताएका हुन् ।
‘प्रचण्डलाई मैले त कमसेकम आठ दशवटा मन्त्री त दिएको थिए नि । अहिले शेरबहादुरका पछि धेरै खान गएका हेर्नुस् त बेहाल !’
उनले खान पाइन्छ कि भनेर एमालेबाटै पनि किन दुई चार जना कुदेको भन्दै प्रश्न गरे । माधव नेपालसँग दुईचार जना गएपनि नयाँ मानिस धैरै पार्टीमा आइसकेको ओलीले दावी गरे । उनले एमाले थोरै चोइटिए पनि सम्मृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना जिउँदै रहेको बताए ।
भदौ ३१, २०७८0comment
माधव नेपाल खरानी घसेर हिँड्नुभयो : केपी ओली
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाल घरमा आगो लगाएर खरानी घसेर हिँडेकाले उनका पछि नलाग्न र जीवन बर्बाद नपार्न आग्रह गरेका छन् । ‘माधव नेपालले अल्मल्याएका र भ्रममा परेका कार्यकर्ता फर्किनुस्’ ओलीले भने, ‘माधव नेपाल घरमा आगो लगाएर, खरानी धसेर त्रिपन्ताम् भनेर तीर्थ यात्रामा हिँडेका हुन् उनलाई म केही भन्दिन ।’
उनले माधव नेपालले व्यक्तिगत, अहंकार, इर्ष्याबाट ग्रसित भएर दुनियाँको जिन्दगीसँग खेलवाड गरिरहेको आरोप पनि लगाए । ‘उहाँ पार्टी प्रमुख भइसक्नुभयो, प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, अब जाने ठाउँ छैन’ ओलीको भनाई छ । त्यस्तै ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका पछि लाग्नेहरूलाई प्रचण्डको घरेलु कार्यकर्ता नहुन आग्रह गरे ।
‘प्रचण्डको घरेलु कार्यकर्ता र उनको सेवा गर्न होइन । गाईलाई घाँस हाले दुध दिन्छ, प्रचण्डलाई जति सेवा गरेपनि के दिन्छन् ?’ ओलीको प्रश्न छ । उनले प्रचण्डले यता पनि दिन्छु उता पनि दिन्छु भन्ने गरेपनि अहिलेसम्म २ वटा मन्त्रीभन्दा दिन नसकेको टिप्पणी गरे ।
अष्टलक्ष्मीलाई ओलीको प्रश्न : फेरि पार्टी फुटाउन माधव नेपाल चाहियो ?
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा अब माधवकुमार नेपाल आवश्यक नभएको बताएका छन् । उनले पार्टीमा गुटबन्दीमात्र गरेको उनले बताए । काठमाडौं जिल्लास्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा उपाध्यक्ष एवं बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले माधवकुमार नेपाललाई एमालेकै फर्किन आग्रह गरेकी थिइन् ।
नेता नेपाल आफूहरुको नेता भएको, एमाले बनाउन जीवन दिएको भन्दै उनले भनेकी थिइन्, ‘एक पटक मनमनमा समीक्षा गर्नुस्, फर्किएर आउनुस् । सुदृढ एमाले बनाउनका लागि तपाईको भूमिका आवश्यक छ ।’ शाक्यभन्दा पछाडि सम्बोधन गरेका अध्यक्ष ओलीले माधव नेपालको पार्टीमा काम नभएको बताए ।
उनले भने, ‘हुन त केही साथीहरु अहिले पनि भन्नुहुन्छ, माधव कमरेड आउनुस् तपाईंको आवश्यकता छ । फेरि फुटाउन उहाँको आवश्यकता छ यहाँ ? फेरि फुटाउने ? के गर्न आवश्यकता छ माधव कमरेडको म बझ्दिनँ ।’ माधव नेपालले पार्टीमा गुटबन्दी मात्र गरेको र साढे ३ वर्षमा सरकारको पक्षमा एक शब्द नबोलेको उनले बताए ।
प्रतिक्रियावादीभन्दा चर्को बोलेको भन्दे ओलीले अघि भने, ‘जहिले पनि रोष्टममा उभिएपछि गीत गाउने ‘डुंगा डुब्न लाग्यो, लौन कोही बचाउ देऊ ।’ कम्युनिस्टको दुई तिहाईको सरकार छ, सातमध्ये ६ वटा प्रदेशमा सरकार छ । अनि डुंगा चाहिँ डुब्न लाग्यो र, कसको डुंगा डुब्न लाग्यो ?’
प्रचण्ड धोकेबाज नेता हुन्, माधव नेपाल कमरेड होइनन् : ओली
by नागरिक टुडे भदौ २९, २०७८
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गृहजिल्ला झापा पुगेर पूर्व सहयोद्धाको चर्को आलोचना गरेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष धोकेबाज नेताको संज्ञा दिएका उनले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई कमरेड नभन्न आग्रह गरे ।
मंगलार गृह जिल्ला झापामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले एमाले फुटेको नभई माधव नेपाल चोइटिएको बताए । पिलो निचारिँदैमा वजन घटेको हुन्न भन्ने गायक जीवन शर्माको गीत स्मरण गर्दै उनले भने, ‘पिलो टनटनी पाक्दै थियो, फुत्त निस्किएर गयो ।’
नेता नेपालमाथि खनिएका ओलीले एमालेलाई कमजोर बनाउन तमासा मात्र गरेको र उनको पार्टी नक्कली नक्कली भएको बताए । १५ वर्षसम्म एमालेबाट फाइदा मात्र लिएको भन्दै उनले भने, ‘माधव नेपाल आन्दोलनमा जोडिएका थिए, फेरि छुट्टिए । यसरी जोडिएका रहेछन् कि रसायन नै पुगेको रहेनछ । पक्लक्क फुक्लियो ।’
तर उनले बनाएको पार्टीले आगामी चुनावमा वडा सदस्य पनि जिच्न नसक्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी छ । उनले माधव नेपाललाई कमरेड नभन्न समेत आग्रह गरे । उनले पनतको बाटो रोजेको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले भने, ‘अब कमरेड माधव नेपाल होइन, एमाले विरोध माधव नेपाल ।’
ओलीले पूर्व सहयोद्दा प्रचण्डको पनि चर्को आलोचना गरे । तान्त्रिक जस्तो मायावी उनले नेता कार्यकर्तालाई अलमल्याउन मात्र काम गरेको ओलीको आरोप छ । ‘प्रचण्ड असल बाबु हो, असल काका हो, असल ससुरा हो, असल सम्धी हो । तर धोकेबाज नेता हो,’ उनले अघि भने, ‘नेता कार्यकर्ताको रगत, पसिनामाथि आफ्नो राजनीतिक दुनो सोझो पारेका छन् ।’
माधव नेपालसँग जादु टुना, न मन्त्र दुबै नभएको बताए । कसैले अह्राए अनुसार पार्टी फुटाएको र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धरासायी बनाउन भूमिका खेलेका ओलीको आरोप छ ।
भदौ २९, २०७८0comment
सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठक सुरु
by नागरिक टुडे भदौ २८, २०७८
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठक सुरु भएको छ । संघीय संसद भवन नयाँ वानेश्वरको ल्होत्से हलमा बैठक सुरु भएको छ ।बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल, नेपाल मजदुर किसानका पार्टीका सचिव प्रेम सुवाल र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सहभागी छन् । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रतिनिधि भने बैठकमा सहभागी छैनन् । एमालेले आफू र सभामुखबीचको समस्यामा सर्वदलीय बैठक बोलाएको भन्दै उक्त बैठकमा सहभागी नहुने बताएको थियो ।
भदौ २८, २०७८0comment
माधव नेपालहरू उपस्थित भए संसद चल्न नदिने ओलीको चेतावनी
by नागरिक टुडे भदौ २३, २०७८
नेकपा एमालेले माधव नेपालसहित पार्टीको कारबाहीमा परेका १४ सांसद उपस्थित भएमा संघीय संसदको बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिएको छ । राष्ट्रपतिको पत्र पढेर सुनाए लगत्तै एमालेले संसद चल्न नदिने रणनीति अख्तियार गरेको हो । अध्यक्ष तथा एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहेका केपी शर्मा ओलीले संसद चल्न नदिन आफ्ना सांसदहरुलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
एमालेमाथि गम्भिर षड्यन्त्र भएकाको भन्दै उनले त्यो षड्यन्त्र चिर्न र संसद प्रतिक्रियावादीहरुो एकलौटी खेलमैदान हुन नदिन संसद अवरुद्ध पारित उनको भनाइ छ । ‘आज राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको पत्र पढेर सुनाए लगत्तै …’ संसदीय दलको बैठकमा ओलीले भने, ‘हामी गम्भीर राजनीतिक लडाइमा छौँ ।’
अध्यक्ष ओलीले एमाले कारवाही गरेका माधव नेपालसहितका १४ सांसदलाई मान्यता दिएर अर्को पार्टी गठन नै हुन नसक्ने दावी समेत गरे । ‘यसरी हाम्रो पार्टीका विरुद्धमा षडयन्त्र गरेको हुनाले र हाम्रो पार्टी फोडेको हुनाले सदन चल्ने स्थिति, समग्रतामा सदन नै चल्ने स्थिति रहेन,’ उनले भने।
भदौ २३, २०७८0comment